Topic: ကားတင်သွင်းမှုကုန်ကျစရိတ် အကြမ်းတွက်နည်း | MyanmarCarsDB - No 1 Car Marketplace/Classifieds Website in Myanmar
Used Cars (1278)	Sedan (366)
Home › Forums › Import Procedures › ကားတင်သွင်းမှုကုန်ကျစရိတ် အကြမ်းတွက်နည်း
Tagged: Dooceeply Shoopyenjoymn alcosygably 8988154
This topic has 30 voices, contains 37 replies, and was last updated by fawTaphyattaw3days ago.
US$5000CIF Yangon တန်ကားတစ်စီးအတွက်အခွန်( အကြမ်း) တွက်နည်း
US$5,000 x 850 (exchange rate) =4,250,000 ks
custom duty 40% x CIF value=1,700,000ks
commercial tax 25% x( CIF
value +Custom Duty =1,487,500ks
( need to pay in FEC)
70% x CIF value
3,500 x 850 =2,975,000ks
Tax Total =6,162,500ks
အထက်ပါတွက်နည်းမှာ ကျွန်တော်တို့ website တွင် user တစ်ယောက်ဖြစ်သော tezatintut မှဝေမျှထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
လူစီးယာဉ် (ဆလွန်း၊ ဗင်၊ ဝက်ဂွန်)များအတွက် custom duty က ၂၀၀၀ cc အထိ ၃၀% ၊ ၂၀၀၀ cc အထက် ၄၀% ၊ commercial tax က ကားအားလုံးအတွက် ၂၅% ၊ကညန အခွန် က ၁၃၅၀ cc အထိ ၇၀%၊ ၁၃၅၀ cc အထက် ၁၀၀% (အခြား ယန္တယား၊ ကရိန်း၊ လူနာတင်၊ ဂေါက်ကွင်းသုံးကား၊ ဘတ်စ်၊ ကုန်တင်ကား၊ light truck များအတွက် custom duty ၁% to ၃% ၊ commercial tax ၁၀% to ၂၅%)လို့ဂျာနယ်တစ်စောင် မှာဖတ်ဖူးပါတယ် ။ February 10, 2012 at 10:04 am
Kyaw Swar Oo
seaman carpermit,eg 2007 model sloon,CIF 15000 ဆိုဘယ်လောက်ကြမလဲ။tax က ၁၆၅?100?65?သိရင်share လုပ်ပါအုံး။
အထူးကားပါမစ်ကားများ Customs Duty နှင့် Commercial Tax ကောက်ခံမှုနှုန်း
အထူးပါမစ်ကားများအပေါ် အကောက်ခွန် Customs Duty နှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Commercial Tax ကောက်ခံရာတွင် လိုင်စင်တန်ဘိုး/ ဆိပ်ကမ်းရောက်တန်ဘိုး (ခ) CIF တန်ဘိုး အပေါ်မှီတည်တွက်ချက်သည်။
အကောက်ခွန်တန်ဘိုး Customs Duty တွက်ချက်ရန် အကောက်ခွန်စည်းကြပ်တန် ဘိုး (Actual Value) အား စတင်တွက်ချက်သည်-
AV = လိုင်စင်တန်ဘိုး/ ဆိပ်ကမ်းရောက်တန်ဘိုး (ခ) CIFတန်ဘိုးUSD x ငွေလဲနှုန်းကျပ်
ဥပမာ – CIF တန်ဘိုး USD 5000 ၊ ငွေလဲနှုန်း (၇၈၄)ကျပ် ဆိုလျှင်….
AV = 5000 USD x ၇၈၄ ကျပ် = ၃၉၂၀၀၀၀/ ကျပ်
အကောက်ခွန် Customs Duty Rate မှာ တင်သွင်းလာသောကားအင်ဂျင်ပါဝါပေါ်မူတည်သည်-
အင်ဂျင်ပါဝါ 2000 CC နှင့်အောက် ၃၀ %
အင်ဂျင်ပါဝါ 2000CC အထက် ၄၀ %
ဥပမာ- တင်သွင်းလာသောကားသည် CIF တန်ဘိုး USD 5000 , 2000CC အောက် ဆိုလျှင် အကောက်ခွန် Customs Duty မှာ-
Customs Duty = AV X Customs Duty Rate
= ၃၉၂၀၀၀၀ X ၃၀% = ၁၁၇၆၀၀၀/-ကျပ်
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Commercial Tax တွက်ချက်မှုမှာ-
Commercial Tax = ( AV + CD ) X 25%
=(၅၀၉၆၀၀၀) X 25 % = ၁၂၇၄၀၀၀/-ကျပ်
သို့အတွက် CIF တန်ဘိုး USD 5000 , 2000CC အောက်ကားတစ်စီးအတွက် အကောက်ခွန် Customs Duty (၁၁၇၆၀၀၀/-)ကျပ် ၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Commercial Tax ( ၁၂၇၄၀၀၀/-)ကျပ် စုစုပေါင်း ( ၂၄၅၀၀၀၀/-) ကျပ် အားနိုင်ငံတော် သို့ပေးဆောင်ရမည်။
အဆိုပါနှုန်းများမှာနိုင်ငံတော်မှသတ်မှတ်ထားသောနှုန်းထားများဖြစ်ပြီး အထူးကားပါမစ်တင်သွင်းသူများအနေဖြင့်မိမိပေးဆောင်ရသောငွေ(ဒဏ်ကြေးအပါအ၀င်) မှာနိုင်ငံတော်သို့အခွန်တော်ပေးသွင်းငွေဖြစ်ကြောင်းသိရှိစေရန်တင်ပြလိုက်ပါသည်။
customs website မှကူးယူဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
How about the tax for seaman,any one know exactly? please.
Ko Aung Myin
Job permit ဝယ်ပြီးတော့ Honda Hybrid ကားသွင်းချင်ပါတယ်
အဲဒါအပြီးအစီးဆိုရင် ဘယ်လောက်ကျနိုင်ပါသလဲ ( Tax တို့ဘာတို့ပါအပြီးပေါ့ )
ရန်ကုန်က ကားshowroomတွေမှာရော Job permit ပေးပြီးဝယ်လို့ရပါသလား ( US 12000 ဘဲရှိတယ်ဆိုရင်ပေါ့ )
Honda Hybrid က ဘာကားလဲ ဆိုတာ လိုပါလိမ့်မယ်။ လောလောဆယ် Insight 1300cc လေးတွေ က CIF 5000 ဆိုတော့ အတော်လေး အသွင်းများတာတွေ့ရပါတယ်။ အပြီးအစီး ဘယ်လောက် ကျမလဲ ဆိုတော့ ကိုယ် သွင်းတဲ့ကားပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ Grade အနေနဲ့ ကတော့ G, L နဲ့ LS ဆို ရှိပြီး LS ကအမြင့်ဆုံးပါ။ ဈေးပိုများပြီး ဒီမှာ ပြန်ရောင်းရင်တော့ ဘယ်သူမှ ပိုပေးချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဦးလေးတစ်ယောက် သွင်းတာ နဲနဲ စောတော့ အပြီးအစီး (ပါမစ်မပါ)၂၀၀ လောက်နဲ့ ပြီးသွားပါတယ်။ Steering wheel မှာ ဖုန်း ခလုပ်တို့ သီချင်း ဖွင့်တဲ့ခလုပ်တို့က ဈေးမှာ မကွာပဲ သေချာ ပါတာကို ရွေးဝယ်မှ ပါတယ်ပြောပါတယ်။ တီဗီနဲ့ နောက်ကင်မရာ ကအစပေါ့။ နောက်သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကတော့ ၂၄၀ လောက်ကျသွားတယ်။ ပါမစ်ကတော့ ၇၀ လောက်ရှိတယ်ပြောတယ် (သေချာ မသိ)။
ရောက်ပြီးသားကားကိုတော့ အရင်း ၂၄၀ လောက်ကို ၇၀ အမြတ်ပေးဝယ်လို့ တော့ ရမှာမဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်။ ၁၀၀ လောက်တင်ရောင်းကြတာတွေ့ပါတယ်။ တစ်ချို့တွေ ၃၄၀ လောက် ရောင်းသလို တစ်ချို့ ငွေပေါ်ချင်တော့လဲ ၃၀၀ လောက်နဲ့ ချရောင်းသွားတာလဲ တွေ့ဖူးပါတယ်။
Insight ကတော့ လောလောဆယ် ပျက်ရင် ပြသနာရှိနိုင်ပေမဲ့ သွင်းတာများတော့နောက်ပိုင်း ပစည်းတော့ ပေါလာမယ်လို့ မှန်းနေကြတာပဲ။
ပါမစ်ဝယ်သွင်းရင် သက်သာပေမဲ့ စိတ်ပူရပါတယ်။ ပြခန်းတွေမှာ ပါမစ်ကိုင်ပြီး သွားဝယ်ရင် ၂၀ လောက်ပိုတယ်လို့လဲ ပြောပါတယ်။ အချို့ ပြခန်းတွေက ကားတော့ မရှိသေးဘူး ရောက်ခါနီး ပြီဆိုတဲ့ကားတွေကို ဓါတ်ပုံကြည့်ပြီးလဲ ၀ယ်ကြပါတယ်။
ဘဏ်မှာ ၁၂၀၀၀ ရှိရင် ရပါပြီ (တကယ်ဆို ၁၀၀၀၀ နဲ့ ငွေလွှဲခအတွက် နဲနဲ ပိုရင်ရတာကိုး)
တစ်ခုရှိတာက ကားဝယ်ရင် သေချာတော့ စဉ်းစားဝယ်စေလိုပါတယ် အခုအချိန်မှာ ၀ယ်ပြီးရင် (ပုံမှန်ပေါက်ဈေးနဲ့ ဆို) ပြန်ရောင်းရခက်ပါလိမ့်မယ်။ လူတိုင်းက အသစ် ပဲ ၀ယ်နေကြတာတွေ့လို့ပါ။
(သိသလောက် အားနေတာနဲ့ ရေးလိုက်တယ်၊ ဟုတ်မဟုတ်တော့ နဲနဲ စုံစမ်းပေါ့) April 26, 2012 at 11:27 pm
Thank you very much Ko Sann Minn.I think it’s better beware of high tech for now.
Hi anyone know CIF value of Mazda RX8 2003,2004 and 2007..
Please help me as i was not at yangon.
2005 RX-8 တစ်စီးတွေ့တာ တွက်ကြည့်တော့ CIF-USD$5821 ကျပါတယ်။ ဒီဆိုက်ကပါ။ http://www.japanesecartrade.com/stock/japan-used-mazda-rx-8-coupe-coupe-724704.html
Thank you Bro konge.mdy…really thank..so i can estimate around CIF for USD 6000…
MarkX 2005 (CIF 11400) ကို ဗ ကားနင့် replacement လုပ်ချင်ရင် အခွန်ဘယ်လောက်ကျလဲဆိုတာတွက်ပေးပါလားဗျ. မတွကတ်တတ်လို့ပါ။ ဗ ကားအပ်ပြိးအသစ်သွင်းရင် ၆၀ လျှော့ကောက်မယ်ဆိုတာကဘာကိုလည်းခင်ဗျ။
Global Swift Pte Ltd
Anyone who want to open L/C in Singapore,kindly let me know.you can get the commission as well.
ကားအဟောင်းလေးကိုရောင်းပြီး 100 စွန်းစွန်းလေးပဲဝယ်ချင်ပါတယ်။ကိုယ်တိုင်သွင်းဖို့ကျတော့ရှုပ်နေသလိုပဲ။ second ပဲဝယ်ရမလား။ဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါသလဲ။
1300 cc ကားကို လေလံဆွဲ ပြီး သယ်ယူစရိတ် အကြမ်း ဘယ်လောက်ကုန်ကျပါသလဲ
mitsubushi lancer evolution 8, 2000cc	Good Morning Everyone	honda Insight	LANCER EVOLUTION X 2008 model	http://www.myanmarcarsdb.com/ads/evo-x/ If u r interested in Lancer Evo X , con	ယနေ့ လူကြည့်အများဆုံး ကားများHarrier (21 views)Crown 2004 Black (11 views)Hond Fit 2008 G(F Package) (11 views)SUPER SALOON (5 views)Camry 2006 Black (5 views)TOYOTA TOWNACE (4 views)Toyota Hilux (4 views)laurel medilist (4 views)BELTA X(၁၃၄သိန်း) (4 views)TOYOTA VISTA (DIESEL AUTO) (4 views) © 2013 MyanmarCarsDB – No 1 Car Marketplace/Classifieds Website in Myanmar. All Rights Reserved.